International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: Press Release: On Union Day, Reappraisal of the Peace Process is Needed
Press Release: On Union Day, Reappraisal of the Peace Process is Needed
[12 February, 2016] Today, on the 69th anniversary of the signing of the Panglong Agreement, it is time to review the failures of the recent peace process, urged Burma Partnership.
"Drawing from its mistakes, the peace process must move toward an inclusive genuine national reconciliation that seeks justice for the countless victims of the ongoing conflict," said Khin Ohmar, Coordinator of Burma Partnership.
Inanew briefing paper titled, "Protection of People Must be Priority in Burma's Protracted Peace Process"released to mark Union Day, Burma Partnership highlights how the peace process of the Thein Sein Government has been unsuccessful, ultimately leading to many powerful ethnic armed organizations (EAOs) refusing to sign the nationwide ceasefire agreement (NCA). It also resulted inacall by civil society organizations to postpone the Union Peace Conference.
The paper calls on the National League for Democracy (NLD), who recently took up seats in the new Parliament, to amend the current format of the political dialogue process to be all-inclusive in order for Burma to achieve genuine national reconciliation.
"When the people of Burma voted for the NLD, they voted for change; it is time forareappraisal of the peace process" said Khin Ohmar. "The peace process must be built onasolid foundation of inclusivity and meaningful and full participation of civil society and women. Women's experience of conflict and war differs to men and their participation in the process is key to ensuringasustainable peace," she continued. "Otherwise, communities on the ground, particularly in armed conflict areas, will continue to be displaced, their fundamental rights violated and their calls for safety and security ignored," she said.
Even now in the fifth year of the peace process, sexual violence against ethnic women continues to be used asaweapon of war by the Burma Army with impunity. The briefing paper points to one crucial ingredient that would lead to sustainable peace that is missing from the current NCA - the full and meaningful participation of women in the peace process. The President Thein Sein's Government signed the Declaration to End Sexual Violence in Conflict in 2014 and Burma isasignatory to the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW). Thus the Government is bound to fulfill its obligations. Yet it has done little to ensure women's full and meaningful participation in the peace process and to end discrimination and violence against women.
The briefing paper also calls for the end to armed conflict and human rights violations throughout Burma, and urges the international community to provide direct political and financial assistance to EAOs and the Government in equal measure, as well as to develop effective accountability mechanisms for the victims and survivors.
Download the full text of the briefing paper "Protection of People Must be Priority in Burma's Protracted Peace Process" here.
Khin Ohmar, Coordinator, Burma Partnership; +66(0)818840772, khinohmar@burmapartnership.org
၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆
ပြည်ထောင်စုနေ့တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုအပ်
ယနေ့သည် ပင်လုံစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့သော ၆၉ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ ဖြစ်သည်။ ယခုလို အခါသမယမျိုးတွင် လက်ရှိအောင်မြင်မှု မရှိနေသော ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်ဟု မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့ (Burma Partnership) မှ တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
"အမှားတွေကို သင်ခန်းစာယူပြီး ပဋိပက္ခတွေကြားမှာ မရေတွက်နိုင်တဲ့ နစ်နာသူပြည်သူတွေအတွက် တရားမျှတမှု ရှာဖွေပေးခြင်းအားဖြင့် အားလုံးပါဝင်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးကို ဆက်လက် ဖော်ဆောင်သင့်တယ်" ဟု မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့၏ တာဝန်ခံ ဒေါ်ခင်ဥမ္မာက ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုနေ့အတွက် ထုတ်ပြန်သော "ရှည်လျားထွေပြားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပြည်သူလူထုအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသည် ဦးစားပေးဖြစ်ရမည်"ဟူသော စာတမ်းတိုတွင် မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့မှ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်သည် အောင်မြင်မှု မရှိဘဲ အင်အားကောင်းသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်း (EAO) အချို့က တစ်နိုင်ငံ လုံးဆိုင်ရာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) ကို လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ငြင်းဆိုခြင်းနှင့် အရပ် ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ (UPC) ကို ရွှေ့ဆိုင်းထားရန် တောင်း ဆိုမှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားစေခဲ့သည်ကို အဓိကမီးမောင်းထိုး ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းစာတမ်းတွင် မကြာသေးခင်က လွှတ်တော်၌ နေရာယူပြီးဖြစ်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အား နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ကို လက်ရှိပုံစံမှ အားလုံးပါဝင်နိုင်အောင် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲ ၍ စစ်မှန်သော အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးကို ဖော်ဆောင်ရန် တောင်းဆိုထားသည်။
"ပြည်သူလူထုတွေက NLD ကို မဲထည့်ခဲ့တာဟာ ပြောင်းလဲခြင်းကို လိုချင်လို့ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ယခု အချိန်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြည်လည်သုံးသပ်ရမယ့်အချိန် ဖြစ်တယ်"ဟု ဒေါ်ခင်ဥမ္မာက ပြောသည်။ "ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး ပြည့်ဝတဲ့ ပါဝင်မှုနဲ့ ခိုင်ခိုင်မာမာအုတ်မြစ်ချ တည်ဆောက်ရမှာပါ။ ပဋိပက္ခနဲ့ စစ်ပွဲတွေကြားက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေဟာ အမျိုးသားတွေနဲ့ မတူကွဲပြားတာမို့ သူတို့ရဲ့ ပါဝင်မှုဟာ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်" ဟု သူမက ပြောသည်။ "အဲဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့ အောက်ခြေ ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ အထူးသဖြင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဒေသတွေမှာ အိုးအိမ်မဲ့ဘ၀ကို ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရမှာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖောက်ခံနေရတာရယ် သူတို့တောင်း ဆိုတဲ့ အေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ရေးနဲ့ လုံခြုံမှုရှိရေးတို့ကို ဆက်ပြီးဥပေက္ခာပြုခံနေရဦးမှာပဲ ဖြစ်တယ်" ဟုလည်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည် ငါးနှစ် သက်တမ်းသို့ ရောက်နေသည့်တိုင် တိုင်းရင်းသူအမျိုးသမီးများ အပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများကို မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ပြစ်ဒဏ်ခံရခြင်း ကင်းလွတ်စွာဖြင့် စစ်လက်နက် သဖွယ် ဆက်လက်အသုံးပြုနေသည်။ ယင်းစာတမ်းတိုမှ သတိပြုရန် ညွန်ပြထားသော အဓိကအချက်တစ်ခုမှာ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် ကြီးမားသော လစ်ဟင်းမှုတစ်ခုမှာ လက်ရှိ NCA နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ အဓိပ္ပါယ်ရှိ၍ပြည့်ဝသော ပါဝင်မှု မရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သော အစိုးရသည် ပဋိပက္ခအတွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု အဆုံးသတ်ရေး ကြေညာ စာတမ်း (Declaration of Commitment to End Sexual Violence in Conflict - DCESVC) ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသည် အမျိုးသမီးများအား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ပပျောက်ရေး သဘော တူစာချုပ် (Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women - CEDAW) ကိုလည်း လက်မှတ်ထိုးထားသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာအစိုးရသည် ၎င်း၏တာဝန်ဝတ္တရား များကို လေးစားလိုက်နာရမည့် တာဝန်ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမျိုးသမီးများမှ အဓိပ္ပါယ် ရှိပြီး ပြည့်ဝစွာပါဝင်နိုင်ရေးနှင့် အမျိုးသမီးများအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများ ရပ်တန့်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ အလွန်နည်းပါးနေခဲ့သည်။
ယင်းစာတမ်းတိုတွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ရပ်စဲရန် တောင်းဆိုထားသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းကိုလည်း နိုင်ငံရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များပေးရာတွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအား အစိုးရနှင့် တန်းတူစွာ ကူညီထောက်ပံ့ရန်နှင့် နစ်နာသူများနှင့် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများအတွက် ထိရောက်ပြီး တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုရှိသော ယန္တရားများ တည်ထောင်ပေးရန်လည်း တိုက်တွန်းထားသည်။
ယင်းစာတမ်းတိုအပြည့်အစုံကို ဤနေရာတွင် "ရှည်လျားထွေပြားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပြည်သူလူထုအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသည် ဦးစားပေးဖြစ်ရမည်" သွားရောက်ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။
ဖုန်း - + ၆၆ (၀) ၈၁ ၈၈၄ ၀၇၇၂၊ အီးမေးလ် - khinohmar@burmapartnership.org